Ibhizinisi zizalela izingulube
Ezolimo idonse osomabhizinisi abaningi banamuhla. Ikakhulukazi uma kuziwa kule ndaba, njengoba ukufuya izingulube emaphandleni. Lo mbono ibhizinisi has a lot of izinzuzo, njengoba ngokwemvelo endowed izingulube izakhiwo esiyingqayizivele. On ukukhiqiza nabo akutholakali ngezinye nganoma uluphi uhlobo izilwane zasemapulazini.
Pig kuyinto iqhawe sangempela ngesivinini kanye nenani inyama ekhuphukayo namafutha. I ngengulube esizalwa enesisindo mayelana eyodwa kilogram. Ngemva kwesonto, isisindo sakhe ifinyelele 2-15 kg, futhi ezinyangeni ezimbili kamuva - 25-30 kg. Ayikho enye isilwane ukuziqhayisa ekwandiseni ezinjalo.
Buhle izingulube futhi ngesilinganiso okuhle yokuzalana: eyodwa mbewu kubanga kabili ngonyaka. Leli yithuba enkulu ukuba uvuke amachwane 14 ngonyaka, okuyinto ekupheleni kwesizini iphenduke 150 Kilos inyama ngalinye. Futhi lokhu mbewu eyodwa kuphela, futhi uma sekuphele iminyaka engaphezu kweyishumi?
Ngaphezu kwalokho, ukuzalaniswa kwamahhashi izingulube kunenzuzo ngalolo yengulube odingeka okusezingeni eliphezulu phakathi izakhamuzi zethu. Lokhu kusho ukuthi umkhiqizo wakho kuyoba ethandwa kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Ukuze izingulube, udinga isikhala, okufanele ezomile futhi efudumele. Kulokhu, kufanele yakhelwe kangangokuthi kahle umoya, ngaphakathi kufanele njalo kube umoya ohlanzekile.
Ukuze unikeze izindawo ezomile, kubalulekile ukubeka isisekelo ukuze kwakhiwe amasentimitha kufika ku-50. Kudingeka nokuba ngokucophelela ukhethe indawo. Amanzi asemhlabathini kufanele owawuseHholo okungenani imitha nengxenye ukujula, ngaphandle kwalokho igumbi nomswakama eliphezulu. Futhi ukuthi akusi kahle ziboniswe zizalela izingulube.
Kukhethwa zohlobo izingulube
Ekukhetheni uhlobo oluthile ukuzalela ayikho imithetho ekhethekile. Okuthile incike izimo zezulu we esifundeni, into amakghono zezimali yomlimi. Zonke izinhlobo kungenziwa ihlukaniswe izinhlobo ezinhlanu eziyinhloko:
Inyama kanye ubhekeni.
Iyodwa into esiqiniseka ngayo, ukuzalaniswa kwamahhashi izingulube Vietnamese - yomsebenzi ethembisa kakhulu futhi wenze nenzuzo. izingulube Asian kungenziwa siyakhuthazeka fattening noma zizalela. Inketho kuqala iyona elula ukuthola inzuzo yemali kusukela ingulube. Umlimi kuyadingeka kuphela ukunikeza amandla adingekayo ezingulubeni Vietnamese nemibandela yeziboshwa.
Ngokuzalanisa izingulube yokuzalanisa futhi kungaba ibhizinisi inzuzo kakhulu, kodwa kuncike esibalweni imithetho ebalulekile. Ukuze izingulube yokuzalanisa kubaluleke kakhulu ubumsulwa zohlobo. Ukuze hhayi ona izinga layo, Akumelwe uvumele nokuzwelana futhi obhalwe ngokucophelela, abanye izingulube kokuwela.
Ngokuzalanisa izingulube, njengebhizinisi, kungaletha engenayo ezinzile nenhlangano efanele icala. Bacon, inyama yengulube, ubhekeni - yonke imikhiqizo ethandwa kakhulu. Into esemqoka ukuthi umkhiqizo wakho kwaba nekhwalithi ephezulu, bese umthengi ke sihlala sikhona. Market imikhiqizo yabo kungaba iphuzu zakho ukudayiswa noma nezelani amathilomu, izitolo nezindawo zokudlela edolobheni lakho.
Imibono Creative: indlela ukudala siqu izimbali zabo ibhizinisi ngokudayisa
Business - ikhofi imishini (izibuyekezo). Kukuthatha isikhathi esingakanani asule uma udinga ukubhalisa, SP?
Yenza studio uhlelo lwebhizinisi
Indlela Vula webhizinisi Woodworking?
Uma Inkampani isebenza ngaso ukulahlekelwa
Funda Mayelana Crowdfunding Lapha, kickstarter
Yini umshado iphupho ubone wena ephusheni ingubo yomshado
Kungakhathaliseki ukwenza ephefumula ngesikhathi
Ubani owadala i-MAINKRAFT? Impendulo yombuzo wezingane eziningi zanamuhla
Oda besizukulwane seMpi Patriotic 1 degree: uhlu awardees. Umlando imiklomelo, izithombe
Pontian amaGreki - ubani lo? Umlando Pontic amaGreki